Ptfe agbakọta Factory - China PTFE agbakọta Manufacturers, Suppliers
PTFE agbakọta Fittings / Pipe
PTFE agbakọta ọkpọkọ na akwa akwa na-eguzogide corrosion, agụụ zuru oke na nrụgide dị elu n'oge njikwa mmiri na-emebi emebi. A na-ejikarị ọkpọkọ na eriri arụ ọrụ maka nnukwu mmiri na-ejikwa mmiri na-ekpo ọkụ. PTFE na akwa akwa nwere PTFE site na iji usoro kachasị emegharị dịka ụdị na akụkụ nke ngwaahịa ndị a. .
Polymer PTFE agbakọta tube / Pipe / sooks, Red
Polymer PTFE agbakọta tube elu viscosity na gel steeti (ọ naghị agbaze n'ezie) na-egbochi ya ịhazi ya na mgbakọ na ntanye ma ọ bụ ịkpụzi ọgwụ. PTFE tubing ya mere akọrọ nkụ ma ọ bụ wepụ ya na ndị na-emepụta hydraulic na (mbanye extrusion) ma ọ bụ na-enweghị (ebule extrusion). Paste extrusion nke PTFE na-amịpụta tubing na-agbanwe agbanwe. Otú ọ dị, ọ na-eme na a ogbe usoro na otú ogologo na-aga n'ihu ogologo na-ejedebeghị na ogbe size, n'adịghị gbazee-processible fluoropolymers FEP, PF ...
Polymer PTFE agbakọta tube / Pipe / sooks, Green
Polymer PTFE agbakọta tube / Pipe / sooks, Blue
1/2 Inch PTFE Ejikọtara tubing / sooks Black
Nke a PTFE tubing anapụta elu arụmọrụ mgbe ọ na-abịa ijikwa Gịnị na ọjọọ gburugburu. Okpokoro ọkụ, abrasion, mmiri mmiri, na kemịkal enweghị ihe nha. Họrọ n'etiti ọkọlọtọ maka ogologo ọsọ na mgbakwunye na-agbanwe maka ịgbagha mgbagwoju anya. Nke a tubing anya karịsịa n'okpuru hundu nke gị elu arụmọrụ ụgbọala, ma gị Gịnị ga-n'anya ya n'ebe ọ bụla. Ngwongwo Bara Uru Dielectric Ike 14V kwa mil arụ ọrụ Okpomọkụ -454 Celsius ruo 500 Celsius F--705 Celsius ruo 260 Celsius C Na-egbochi Oxyg ...
Solid Core PTFE Waya
PTFE Polymer Waya maka okpomọkụ dị elu na-eji ezigbo mgbanwe. Maka ojiji ebe achoro iguzogide abrasion. Ngwa: ụgbọelu, azụmahịa, ịgba ọsọ.